Ranomanitra, labozia manitra, hanitra an-trano - fonosana famoronana BXL
mamaky bebe kokoa>
73 mari-pahaizana famolavolana iraisam-pirenena
Manomboka amin'ny hevitra ka hatramin'ny famitana
Niorina tamin'ny taona 1999, BXL Creative dia iray amin'ireo orinasam-pamokarana fonosana sy orinasa mpamokatra entana any Shina, natokana hanampiana ny mpanjifa hamolavola ny lanjan'izy ireo, manome mpanjifa iraisampirenena miaraka amina vahaolana fonosana fanalahidy.
Fampisehoana orinasa 360 °
Mifandraisa aminay izao Mifandraisa aminay izao hijery bebe kokoa +hijery bebe kokoa +
BXL Creative dia nahazo ny loka famoronana iraisam-pirenena momba ny Pentawards telo
Tao amin'ny "Fetin'ny Pentawards" ny 22 - 24 septambra 2020 dia nanao kabary ifotony. Anisan'ireo ny mpamorona sary malaza Stefan Sagmeister sy ny talen'ny famolavolana marika & fonosana any Amazon USA Daniele Monti. Nozarain'izy ireo ny hevitra farany amin'ny famolavolana ...
BXL Creative Packaging Guizhou Factory sonia ofisialy!
Tamin'ity taona ity, izay mifanandrify amin'ny tsingerintaona faha-21 an'ny orinasa, ny BXL Creative dia nasain'ny Governemantam-paritany Guizhou hanangana orinasa any Guizhou hampiroborobo ny fampandrosoana ara-toekarena any. Amin'ny maha-orinasa voatanisa feno fankasitrahana antsika dia andraikitray ny mandray anjara amin'ny ...
BXL Creative Nahazo mari-pankasitrahana famonosana 4 amin'ny fifaninanana Mobius Advertising Awards
Nahazo ny "Best Works Award" sy "Gold" telo ho an'ny famolavolana fonosana tamin'ny fifaninanana Mobius Advertising Awards 2018 ny BXL Creative, nametraka ny firaketana tsara indrindra tao anatin'ny 20 taona tany Chine. Io ihany koa no orinasa tokana mahazo loka any Azia. Ny hevitr'ity famolavolana ity dia avy amin'ny fananganana ...
Rihana faha-6, Block One, tranobe Shenye Jinyuan, Qingshuihe, Luohu, Shenzhen, CHINA, 518023
Momba ny BXL Creative
© Copyright - 2020: Zo rehetra voatokana.